Voampanga ho manao sivana ny Klioban’ny masoivohon-gazety vahiny rehefa nanaisotra hala-tahaka fanesoana ny fangon’ny lalao olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Natao naka ny endrika coronavirus ny faneva olaimpikan'i Tokyo
Voadika ny 26 Mey 2020 5:41 GMT
Mariky ny Klioban'ny Solontenam-baovao vahiny (FCC) ao Japana tao amin'ny fitoerana taloha an'ny fikambanana tao Yūrakuchō, Tokyo. Nifindra tamin'ny toerana vaovao sy afovoan-tanàna kokoa ny FCCJ avy eo ka lasa tao Marunouchi manakaiky an'i Tokyo, mahatazana tsara ny Lapa Imperialy. Saripikan'i Nevin Thompson.
Voampanga ho nanao sivana ny mpitarika ao amin'ny klioban-gazety tranainy indrindra ho an'ireo vahiny mpanora-gazety tao Japana rehefa voaaisotra tao amin'ny tranonkalan'ny gazetibokiny mivoaka isam-bolana ny sary iray maka tahaka am-panesoana ny Olaimpikan'i Tokyo. Zara fa nilaza ny filohan'ny klioban-gazety sady mipetraka ihany koa ao amin'ny komitin'ny fampitam-baovaon'ny Lalao Olaimpikan'i Tokyo fa noho ny raharaham-panitsakitsahana ny copyright no anton'izany.
Ny fonon-gazetin'ny Number 1 Shimbun, gazetiboky ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Foreign Correspondents Club of Japan (FCCJ), sady famakin'ny mpanora-gazety mitatitra momba io firenena io, tamin'ny avrily 2020, no nanasongadina sary fanevan'ny Lalao Olaimpikan'i Tokyo naseho amin'ny endriky ny coronavirus vaovao mahatonga ny COVID-19.
Fonon-gazety 1 Shimbun nivoaka avrily 2020 talohan'ny nanesorana ily sary fanesoana. Pikantsary avy amin'ny Internet Archive, voatahiry tamin'ny 17 Mey.
Taorian'ny filazana fa naharaisana fitarainana avy amin'ny Komity Manomana ny Lalao Olaimpikan'i Tokyo fa “tsimifaditrovana amin'ny athleta” ny sary amin'ny fonon-gazety, dia nanapa-kevitra ny filoha sy ny mpikambana hafa ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny FCCJ, tamin'ny 21 mey 2020, ny hanaisotra ny sary tao amin'ny tranonkalan'ny gazetiboky Number 1 Shimbun.
Tamin'ny firesahana izany tao amin'ny valandresaka ho an'ny gazety navoaka tao amin'ny YouTube tamin'ny 21 mey, nanambara ny filohan'ny FCCJ Khaldon Azhari fa ny anton'ny fanapahan-kevitry ny filankevi-pitantanana hanaisotra ny sarin'ny fonon-gazety Number 1 Shimbun avy ao amin'ny tranonkala dia noho ny fanitsakitsahana ny copyright.
“Maro taminay tao amin'ny FCCJ no tsy faly mihitsy tamin'ny fanapahan-kevitra hanaisotra ny sary,” hoy i David McNeill, masoivohon'ny The Irish Times tao Japana teo aloha, ny gazetiboky britanika The Economist ary ny famoahana hafa, sady tonian'ny Number 1 Shimbun teo aloha, tamin'ny antsafa iray nifanaovany tamin'ny Global Voices.
“Vao tamin'ny fotoana nanaovan'ny filohan'ny FCCJ Khaldon Azhari valandresaka ho an'ny mpanora-gazety antserasera tamin'ny 21 mey ho fanazavana ny fanapahan-kevitra, dia efa nisy ireo olona nilaza taminy ny tsy hanaovana izany,” hoy i McNeill.
Maro ireo mpanora-gazety toa an'i Tim Hornyak, izay manao tatitra momba ny teknolojia ao Japan no nitsikera tao amin'ny Twitter ny fanesorana ny sary fanesoana:
Nanapa-kevitra ny filankevi-pitantanan'ny Klioban'ny Solontenam-baovao Vahiny ao Japana ny hanaisotra ny fonon'ny gazetiboky tamin'ny avrily, izay namoaka sary maneso ny fangon'ny lalao olaimpika 2020 ho toy ny kasinga coronavirus, rehefa nolazain'ny komity olaimpika fa manohintohina izany. Izany no fahalalahana miteny eto Japana
Raha arivo monja ny vita pirinty amin'izany, dia voatombana ambony loatra ny takatra sy ny fahefan'ny FCCJ sy ilay gazetiboky, hoy i McNeill. “Ankehitriny lasa iray amin'ny gazetiboky sy ny fonon-gazety be mpamaky indrindra teo amin'ny tantaran'ny Number 1 Shimbun ilay navoaka amin'izao fotoana”, hoy izy nanampy teny.
Manana eritreritra mitovy amin'izany i Gearoid Reidy, izay mitatitra momba an'i Japana ho an'i Bloomberg:
Ny tiako lazaina, tahaka ny hoe tsy nahita mihitsy iny sary iny aho raha tsy tamin'ny fitarainan'ny Tokyo 2020 ary *mpikambana ao amin'ny FCCJ aho*
Nandray matotra kokoa ny raharaha ny hafa. Taorian'ny fanesorana ny sary, mpanora-gazety maro no nanameloka ny fanapahan-kevitra tao amin'ny fanambaràna iray izay navoakan'i Michael Penn ao amin'ny Shingetsu News (SNA), filoha-lefitry ny FCCJ teo aloha sady mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanana teo aloha:
Ankona ireto mpanora-gazety manao sonia eto ambany ireo tamin'ny fahitana fa tsy nanao ny andraikiny araka ny tokony ho izy amin'ny fiarovana ny fahalalahan-gazety ny klioba, efa izany no adidy masina indrindra nankinina taminy. Tamin'ny teniny sy ny fihetsika nataony no nanimbàny ny fahalalaham-pitenenana eto Japana sy nanomezany hery ny fahavalon'ny adihevitra demaokratika. […]
Tamin'ny antsafa imailaka nifanaovana tamin'ny Global Voices no nilazan'i Khaldon Azhari fa “tsy manaiky izy” hoe famelezana ny fahalalaham-pitenenana ny fanesorana natao. “Namerimberina nilaza hatrany izaho sy ny filankevi-pitantanana fa mijoro hatrany ho akanin'ny fahalalahan-gazety eto Japana ny FCCJ tao anatin'izay 75 taona nijoroany tao amin'ny tantara izay, hoy ny nambarany.
Nanamafy izay nolazainy tamin'ny valandresaka ho an'ny gazety tao amin'ny YouTube tamin'ny 21 mey i Azhari, tao amin'io fifandraisana imailaka nifanaovana tamin'ny Global Voices io, fa naharay taratasy avy amin'ny komity mikarakara ny lalao olaimpika Tokyo ny FCCJ fa “tena nitrandraka ny sary fanevan'ny [lalao olaimpikan'i Tokyo ofisialy] ny fonon'ilay gazetiboky” ary “fanitsakitsahana ny copyright” izany.
“Hentitra kokoa noho ny any amin'ny firenenkafa ny lalàna sy ny fitsipiky ny copyrights (sic) eto Japana,” hoy i Azhari tamin'ny Global Voices. “Izany no nahatonga ny filankevi-pitantanan'ny [FCCJ] handefa ny raharaha tany amin'ireo mpahay lalàna ato aminay hanaovana fakan-kevitra ara-pitsarana.”
Nilaza i Azhari fa nanao fehinkevitra ny mpahay lalàna ao amin'ny FCCJ fa azo heverina ho manitsakitsaka ny copyright araka ny lalàna japoney ilay fonon-gazety.
“Tsy resy lahatra amin'izany ny mpanora-gazety sasany ao amin'ny klioba ary mihevitra ny fangatahana hanaisotra ilay sary ho famelezana ny fahalalaham-panehoan-kevitra […],” hoy i Azhari. “Saingy milaza ihany koa ny taratasin'ny [komity olaimpikan'i Tokyo] fa niniana nolokoina ratsy amin'ny fanakambanana azy amin'ny viriosin'ny COVID-19, izay fandrahonana ratsy niteraka fahafatesana an'arivony maro manerana izao tontolo izao, izay mifanohitra mivantana amin'ny idealin'ny hetsika olaimpika, ilay faneva.”
Nataon'ny Komity Mpikarakara ny Lalao Olaimpika ao Tokyo ao anatin'ny lisitry ny vaomieran'ny fampitam-baovao hita ao amin'ny tranonkalany i Azhari, ka noheverina fa misy ny fifandonan-tombontsoa tamin'ny fanapahan-kevitra hanaisotra ny fonon'ilay gazetiboky. Nanohitra izany i Azhari.
“Talanjona aho raha nahafantatra fa mpikambana ao,” hoy i Azhari. “Tsy misy ny [fandoavam-bola] na tombontsoa hafa avy amin'ny komity olaimpika ho an'ny filohan'ny [FCCJ].”
Nanolo-kevitra i David McNeill fa tsy nisy ny hamehana hanesoran'ny FCCJ avy hatrany ilay sary. Nilaza aza i McNeill, fa azon'ny FCCJ natao ny nampanantena hanao fanadihadiana tamin'ilay raharaha, izay nahafahana naka fotoana bebe kokoa hakana ny hevitry ny mpikambana.
“Fa na izany aza, tsy ao amin'ny filankevi-pitantanana aho ka tsy matahotra ny hotoriana,” hoy i McNeill. “Tsy manambola betsaka handoavana izay lany ara-pitsarana ny FCCJ.”
Mbola olana bebe kokoa ho an'ny FCCJ ny tsy fahampian'ny fitaovana ara-bola, fikambanana izay naorina voalohany tamin'ny taona 1945 taorian'ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa.
“Mila mitady vahaolana amin'ny olana ara-bola mianjady aminy ny FCCJ,” hoy i McNeill. “Ny fanapahan-kevitra hiondrika eo anoloan'ny komity olaimpikan'i Tokyo dia fandravana ny maoralin'ny FCCJ sy ny lazany, raha mihena ny mpikambana ao aminy izay miteraka maza loatra ny fihenan'ny fidiram-bola.”
15 ora izaySingapaoro